Borrasca Miguel: hunhu, kuumbwa uye mhedzisiro | Network Meteorology
ChiGerman Portillo | 12/04/2021 11:13 | Mamiriro ekunze
Isu tinoziva kuti mamiriro ekunze anogona kuve asingatarisirwe sezvo iri mhedzisiro yekuchinja kwehuwandu hwakawanda hweshanduko hunoshandura hunhu hwavo munguva pfupi. Mumwe wemhedzisiro yeshanduko dzezvakatipoteredza yaive iyo squall Miguel. Uye ndezvekuti mumwedzi waJune 2019 kuputika cyclogenesis yeanonyanya kufarira uye asinganzwisisike akaitika. Yakanga iri dutu rakadzika uye yakaitiswa neacclogenesis maitiro kune yakaderera latitudes. Ichi chinhu chisati chamboonekwa uye vazhinji vakazvibatanidza nekushanduka kwemamiriro ekunze.
Muchikamu chino tiri kuzokuudza zvese hunhu, mavambo uye mhedzisiro yedutu Miguel.
2 Zvinokonzera dutu Miguel
3 Kuumbwa kwedutu Miguel
4 Mhedziso yeichi chinoshamisa chiitiko
Meteorologists mazhinji uye vafemberi vemozulu havana kutenda zvaiuya munzira yedu kutanga kwaJune 2019. Dutu rakadzika raizoenda kuchamhembe kwakadziva kumadokero kweIberian Peninsula panguva imwechete iyo yaizoenda kunoputika cyclogenesis. Icho chinhu chisina kujairika chiitiko kwete chete panguva yegore umo chakaitika, asiwo munzvimbo dzakatangira peninsula yedu.
Aya masisitimu uye maitiro ehupenyu kudzamisa kumanikidza zvakanyanya kuitika mumwedzi inotonhora yechando uye kumatunhu akakwirira kana pakati peAtlantic Ocean. Izvo zvinofanirwa kutariswa kuti kuumbwa kwedutu kunowanzoitika munguva yechando sezvo meteorological misiyano inofanira kutora mamwe maitiro kuti iitike. Tinogona kutaura kuti iyo nguva yekudzika kwedutu dhizaini uye cyclogenesis maitiro anonyanya kushanda uye akasimba munguva yechando kuchamhembe hemisphere.
Dzimwe nguva, kuumbwa kwemadutu kunogona zvakare kuitika mumwedzi yechirimo neyekuvhuvhu, asi zvisingaite muzhizha. Ichi ndicho chimwe chezvikonzero nei dutu Miguel anga asingafungidzirwe uye aida kuziva. Zvinokonzera kana zvikonzero zvemadutu akadzika uye maitiro ecyclogenesis anoshanda uye akasimba panguva dzechando kuchamhembe kwenyika.
Zvinokonzera dutu Miguel
Ngatione kuti ndezvipi zvinhu zvakakonzera dutu Miguel uye nei zvakaitika panguva ino yegore. Iyo jeti rwizi mukukwirira ndiye mutyairi mukuru weAtlantic dutu sezvo iri yakanyanya kusimba uye yakaderera pane inoenderana latitude neNorth Atlantic Ocean. Iwo anopisa anopesana pakati pekupisa kana sosi inopisa inodziya pamwe chete iyo inotonhorera polar air mass ndiyo inonyanya kutaurwa mumwedzi inotonhora. Izvo zvinofanirwa kutariswa kuti izvi zvinopisa zvinopisa pamwe nehukuru hwepolar jet zvinokonzeresa zvakanyanya kushushikana mhedzisiro iyo inoita dutu rakakura.
Kurasikirwa kwechipiri kunoumba pane ino nharaunda yakasimba yakasimba yekupisa kwakanyanya kuwanda mukati memwedzi yechando. Izvi zvinokonzeresa kuti tembiricha dzisiyana. Chimwe chinokwanisika chinhu cheMiguel dutu kuburitswa kwemhepo inotonhorera polar iyo inowanzo kuve yakabatana neyakanyanya jet inlets uye inogona kutakura yakadzika mafungu ayo anogona kuita maitiro ekudzikira kumanikidza kuumbwa uye cyclogenesis.
Kune zvimwe zvikonzero zvechipiri zvinogona kufarira maitiro ecyclogenesis munguva yechando, kunyange isina kunyanya kukosha mune ino kesi. Cyclogenesis iri kuumbwa kwemadutu anonyanya kukonzerwa nekudonha kwemhepo yekudenga. Kana zvasvika pakuputika cyclogenesis, inoreva kudonha zvine hutsinye mumhepo yekumanikidza, zvichikonzera dutu rakasimba. Ose maviri cyclogenesis uye iyo jet rwizi ndizvo zvinhu zvakakosha zvekusimudzira, kugadzirisa uye kudzika kwedutu.
Kuumbwa kwedutu Miguel
Dutu iri rakaumbwa pasi pehupo hweyakajairika masikosi ecyclogenesis uye nekukurumidza kudzika. Iyo yakanyanya kukwirira kwekukwirira kwemhepo, iyo polar jet uye kudonha mumatanho epasi aive munzvimbo yeakasimba kupisa kusiyanisa, inozivikanwa seye baroclinic zone mumativi akadzika.
Pakutanga kwaJune zvinogona kuonwa kuti iyo jeti rwizi rwakanyanya kusimba uye nharaunda yakadzikira. Kune rimwe divi, iyo inotonhorera inotonhora inoputika inoiswawo mucherechedzo uye inopesana neakagara aripo anodziya mweya mashoma nekuda kweiyo inert uye passive subtropical anticyclone. Mhedzisiro yeizvi zvese ndiko kuwedzera kweye thermal gradient pazasi pe axis yejet. Ndokunge, yakasimba baroclinity. Iyo yepasi sekondari mumatanho epasi aive munzvimbo ye yakasimba yekupisa gradient ndiyo inoitisa iyo inoputika cyclogenesis maitiro.
Iyi mamiriro ese aive asina kunaka mune zvese fomu uye kusimba kwayo. Neichi chikonzero, iyo squall Miguel hainyanye kuwanikwa. Kune izvi, akaenzana anomaly mepu anoratidzwa anotiratidza iwo mwero wekusajairika iyo iyo jet rukova inogona kuratidza uye kusimba kwayo. Iyo jet ndiyo protagonist huru yemamiriro ese aya. Izvi zvinodaro nekuti kana iyo jeti ikauya zvakanyanya kubva kumatunhu epamusoro, kumatunhu epasi anogona kuitika ne kumhanya kwemhepo anosvika 150-200 km / h. Izvo zvaive zvakare zvisiri zvakajairika zvemhepo inotonhora yekumashure yakatungamira iyo jet polar uye izvo zvakaita kuti baroclinity inyanye zvakanyanya munzvimbo iyo dutu reMiguel rakaumbwa.
Mhedziso yeichi chinoshamisa chiitiko
Squall Miguel chaive chinhu chisingawanzoitika chakasiya vafemberi nevafemberi vaine kuravira kunoshamisa mumiromo yavo. Tinogona kutaura kuti kuumbwa uye kudzika kwekudzika zvinhu zvisingawanzoitika maererano neanotungamira asi zvakare zvisingawanzoitika mune irori rudzi rwegore. Izvo zvinogumiswa kuti aingove akasimba kwazvo nenzvimbo yebaroclinic mu akaturikidzana akaturikidzana enzvimbo uye nemusi watakanga tiri.
Zvese izvi zvikonzero zvakaita kuti dutu Miguel ridzikire munhoroondo seimwe yeasingawanzo kubvira mamiriro ekunze akanyorwa. Ndinovimba kuti neruzivo urwu unogona kudzidza zvakawanda nezve dutu Miguel, hunhu hwayo uye kuumbwa kwayo.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Network Meteorology » Mamiriro ekunze » Squall Miguel